चीन टर्क टूलबक्स निर्माता र आपूर्तिकर्ता YSXF
पिट पोसेज - ट्रक युटभ पिक अपको लागि लकको साथ एल्युमिनियम ट्रेलर जिन्ग भण्डारण उपकरण बक्स - वाटरप्रूफ - टिकाऊ - बहुमुखी - हीरा असहज डिजाइन - बोक्न सजिलो - सजीलो माउन्ट - सहज
सजिलो माउन्टिंग र स्याहारको लागि लाइटवेट - यो उपकरण बक्स एक कडा तर हल्का वजनको साथ डिजाइन गरीएको छ जसमा A-फ्रेम शैली ट्रेलरहरूको अगाडि माउन्ट गर्न सकिन्छ। जम्मा गर्न सजिलो, एक ठाउँबाट अर्को बोक्नको लागि आवश्यक यदि आवश्यक छ भने। तपाईंको उपकरण वा वस्तुहरू तपाईंको ग्यारेजमा भण्डार गर्न उत्तम समाधान र तपाईंको संलग्न ट्रेलरमा अधिक भण्डारण स्थान थप गर्दछ।
UR टिकाऊ हीरा रग्गड डिजाइन - असभ्य प्रयोगको लागि पूर्ण वेल्डेड सिमहरूको साथ रग्ड एल्युमिनियमको निर्माण। भण्डारण टूलबक्सले तपाइँको वस्तुहरूलाई खराब मौसमबाट सुरक्षित गर्दछ, र हीरा प्लेट निर्माण आउने बित्तिकै आकृति राख्छ। लक योग्य बक्स घर टाई डाउन, व्हील चक्स, पट्टि, उपकरण बक्स, र अन्य आवश्यक गियर घर हुनेछ।
ID LID विस्तारमा प्रयोगको सहजका लागि पूर्ण रूपमा विस्तार गर्दछ- गहिरो घेराले शीर्षलाई पूर्ण रूपमा खोल्न अनुमति दिन्छ तपाईंको ट्रेलरको बिरूद्ध माउन्ट गरिएको छ भने पनि, र यसलाई ट्रेलरमा संलग्न भए पछि यसलाई आइटम थप्न वा हटाउन सहज बनाउँदछ। तपाईंको उपकरणहरूमा पहुँच गर्न जीभबाट तपाईंको उपकरण बक्स खारेज गर्न आवश्यकता हटाउँछ।
✅ अतिरिक्त भण्डारण ठाउँ र पहुँच- तपाइँसँग थप उपकरण र सामानहरू राख्नुहोस्। तपाईंको सामानहरू सुरक्षित रूपमा फिट हुनेछ लकमा जुन बक्सलाई होल्ड गर्दछ ट्रेलरमा रोक्दा। ठाउँको चिन्ता बिना तपाईले आफूलाई चाहिने चीज लिन सक्नुहुन्छ। एक उपकरण कहिल्यै नभुल्नुहोस् तपाईका सबै उपकरणहरू संगठित गरेर र एल्युमिनियम जिभ भण्डारण बाकस भित्र सुरक्षित राख्नुहोस्।
S तपाईंको संतुष्टि हाम्रो # 1 प्राथमिकता हो - पिट पोसेजको ट्रेलर जिब्रो भण्डारण टूलबक्स ट्रेलरहरूको लागि तपाईंको भण्डारण आवश्यकताहरूको जवाफ दिनको लागि डिजाइन गरिएको हो। हामी विश्वास गर्दछौं कि तपाईं हाम्रो उपकरण बक्सलाई माया गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं १००% सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने हामी तपाईंलाई पूर्ण फिर्ती वा नि: शुल्क आदान प्रदान गर्दछौं, कुनै प्रश्नहरू सोधेन। हामी year बर्षको निर्माता वारंटी प्रदान गर्दछौं, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, र हामी खुशीसाथ सहयोग गर्नेछौं।
पिट पोसेज ट्रेलर भाषा बक्सले तपाईंको सामानहरू सुरक्षित राख्नेछ जब राम्रो देखिन्छ!
पूर्ण रूपमा वेल्डेड सीमहरूको साथ रगल्ड एल्युमिनियमको निर्माण, वेदरप्रुफ टूलबक्स तपाईंको उपकरणहरू र सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नका लागि उत्कृष्ट छ, वा ग्यारेजमा तपाईंको उपकरणहरू भण्डारण गर्न सुरक्षित छ र अर्को यात्राको लागि तयार छ।
✔️ ”✔️ "in। विस्तृत फिर्ता, १.5..5 चौडा अगाडी, १ tall अग्लो, २०..5 गहिराइ, २२ पाउण्ड
Smooth सफा अपरेशन र सजिलो पहुँचको लागि अफसेट ग्यास स्ट्रटको साथ एरोडायनामिक्सका लागि डिजाइन गरिएको पेपर
✔️ हीरा प्लेट निर्माण वर्षौं देखि राम्रो देखिन्छ
✔️ गहिरो recessed हन्ज शीर्ष खोल्नको लागि अनुमति दिन्छ पूर्ण रूपमा तपाईंको ट्रेलर बिरूद्ध माउन्ट हुँदा पनि
सजिलैसँग आफ्नो उपकरणहरू र गियर एक टिकाऊ बक्समा तपाईंको ट्रेलरको जीभमा सजिलैसँग ट्र्याक्सिक बिना सजिलो पहुँचको लागि तपाईंको ट्रेलर खोले बिना वा ट्रकको पछाडि सीटमा तपाईंको उपकरणहरू भण्डारण नगरीकन।
आज कार्टमा थप्नुहोस् र ठूलो मूल्यका लागि अतिरिक्त भण्डारण ठाउँको आनन्द लिनुहोस्!
अघिल्लो: फ्रिजन फूड उद्योग एल्युमिनियम उत्पादनहरू
अर्को: एल्युमिनियम मिश्र धातु उपकरण
हाम्रो म्याक्सएक्सहोल ट्रेलर भाषा बक्स तपाईंको उपकरणहरूको लागि अतिरिक्त भण्डारण, क्याम्पि ge गियर्स, सुरक्षा चेन, पट्टिहरू, कार कभरहरू, बाहिरी उपकरण, केबुलहरू, हिच सहायकहरू, केबुलहरू, ह्विल चकहरू र अधिक बढि सामानहरू प्रदान गर्न ए-भाषा फ्रेमको साथ ट्रेलरहरूमा चढ्ने डिजाइन गरिएको छ। । उपकरण वा गियर कहिल्यै नबिर्सनुहोस् जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक हुन्छ! - टिकाऊ र संक्षारण प्रतिरोधी लाईट-इन-वेट एल्युमिनियम सामग्रीबाट पूर्ण वेल्डेड सिम निर्माण र कठोर पाउडर कोट फिनिशबाट बनेको - हीरा प्लेट प्लेट ...